Wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ciidamada DFS lagula eegta Marka & Khasaaraha | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ciidamada DFS lagula eegta Marka & Khasaaraha
Wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ciidamada DFS lagula eegta Marka & Khasaaraha
H/Hoose (Halqaran.com) – Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa qarax miino lagula beegsaday Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabllaha Hoose, iyadoo qaraxaasi uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba isugu jira.
Qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa Ciidamada Dowladda Soomaaliya lagula beegsaday xaafadda Awbaale, gaar ahaan goob la sheegay in ay ciidamadu fadhiyeen.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in goobtaasi laga qaaday dhaawacyada ugu yaraan shan ka mid ah Ciidamada Dowladda, inkastoo laba ka mida ay u geeriyoodeen dhaawacyadii qaraxaasi ka soo gaaray.
Ururka Al-Shabaab oo sheegtay masuuliyadda qaraxa ayaa ku faanay in ay ku dileen laba ka mid ah Ciidamada Dowladda, halka ay ku dhaawaceen toban kale.
Ciidamada Dowladda oo hawlgal ka sameeyay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaan jirin cid la sheegay in ay qaraxaasi u soo qab qabteen.
Si kastaba, qaraxan ayaa waxaa uu ku soo aadayaa, xilli amniga Magaalada Marka uu aad uga soo reynaayay muddooyinkii ugu dambeysay.
Qarax lala beegsaday ciidamada dowladda